Ntughari, taa, na mgbanwe nke Chineke mere na nkpuru obi gi | Ilblogdellafede
Na-atụgharị uche taa maka mgbanwe nke Chineke mere na mkpụrụ obi gị
Jizọs kpọọrọ Pita, Jems na nwanne ya nwoke Jọn wee duru ha gaa nnukwu ugwu naanị ha. O we nwogha n'iru ha: uwe-Ya we chacha acha dika nke n ,nyeghi onye-nwe uwa di ọcha. Mak 9: 2-3
You na ahu ebube nke Chineke na ndu gi? Ọtụtụ mgbe, nke a bụ ọgụ na mgba. Anyị nwere ike mata ngwa ngwa nsogbu niile chere anyị ihu ma lekwasị anya na ya. N’ihi ya, ọ na-adịkarịrị anyị mfe ileghara ebube Chineke na ndụ anyị anya. You na ahu ebube nke Chineke na ndu gi?
Ememe anyị na-eme taa bụ ncheta nke gosipụtara ndịozi atọ ebube ya n’eziokwu. O we duru ha rigo n'ugwu di elu ma nwogharia ya n'ihu ha. Ọ tụgharịrị na-acha ọcha ma na-egbuke egbuke na ebube. Nke a bụ ihe dị mkpa nye ha ndị chọrọ ịkwado maka ata ata ahụhụ nke ọnwụ na ọnwụ Jizọs ga-aga.
Otu nkuzi anyi kwesiri isi na oriri a bu eziokwu n’ebubeghi ebube nke Jisos n’obe. N’ezie, a gosipụtara ahụhụ ya na ihe mgbu ya n’oge ahụ, mana ọ gbaneghị eziokwu ahụ bụ na ebube Ya ka dịkwa etu o siri taa ahụhụ n’obe.
Otu a ka ọ dị na ndụ anyị. A gọziri agọzi anyị na-enweghị atụ, Chineke ka chọrọ ịgbanwe mkpụrụ obi anyị ka ọ bụrụ ìhè na amara. Mgbe ọ bụla ọ ga - eme, anyị ga - agbasi mbọ ike ịhụ ya mgbe niile. Ma mgbe anyị na-ata ahụhụ ma ọ bụ chere ihu n’obe, anyị agaghị ewepụ anya anyị ozugbo n’ihe ndị dị ebube o mere na mkpụrụ obi anyị.
Na-atụgharị uche taa maka mgbanwe mara mma ma dịkwa omimi nke Chineke mere ma na-aga n'ihu ịchọ ime mkpụrụ obi gị. Mara na Ọ chọrọ ka ị lekwasị anya n’ebube a ma nwee ekele ruo mgbe ebighi ebi, ọkachasị mgbe ị na-eburu obe ọ bụla enyere gị.
Onyenweanyi, ya hu ebube gi na ebube i nyere nkpuru obi m. Ka anya m guzo n’elu amara ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Enwere m ike ịhụ gị na ebube gị karịchaa n’oge ihe isi ike. Jesus m kwere na gị.
← Na post gara aga Gara aga post:Ekpere nke August 5 ụbọchị ọmụmụ nke Nwanyị nwanyị anyị
Ọzọ Post → Post ozo:Ngbanwe nke Onye-nwe, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 6